Indlela Yokuphatha Ugaxekile Lolimi Ku-Google Analytics - Yenza umkhuba kusuka ku-Semalt
Ochwepheshe be-intanethi bathi i-keyword nokufaka ukungena kogaxekile kwabasebenzisi be-Google Analytics manje kuyinto yesikhathi esidlule. Ukuhlaziywa kwe-Google kubonisa ama-URL nemilayezo yogaxekile njengobungozi lapho abaduni noma abakhohlisi bethumela idatha yamanga engahleliwe kumawebhusayithi angahleliwe kanye namakhodi wokulandelela we-GA (Google Analytics).
Ngokwesazi esihamba phambili esivela ku Semalt , i-Artem Abgarian, le nselele ingaxazululwa kalula ngokusebenzisa ukuhlunga. Kodwa-ke, ukuzonda ulwazi kuwukuthi kuyinkinga.
Izindaba ezimbi kubasebenzisi be-intanethi, abanikazi bewebhusayithi kanye nabahleli yilokho abaduni baye bahlukumezeka kusuka kugama elingukhiye lomuntu kanye nokugaxekile kogaxekile. Abakwa-Spammers manje bashaya abasebenzisi be-inthanethi ngembiko yelwimi. I-SEO Roundtable yabhala umbiko wamasonto amathathu afanayo adlule.
Esikhathini sokuqukethwe kwe-Google Analytics, ithrafikhi engalungile ingachazwa njengama-fake hits athunyelwe kumpahla we-Google Analytics yomsebenzisi. "I-hit" ibhekisela ekusebenzisaneni komsebenzisi nesayithi okuholela ekuthumeleni kolwazi kumpahla ye-Google Analytics. Isibonelo, kungaba "ukuguqulwa," "ukubuka," "umcimbi," noma "ukubukwa kwekhasi."
I-fake hit eyenziwa yi-bot noma uhlelo esikhundleni sokusebenzisana ngumuntu. Okwamanje, kungenzeka ukukhohlisa noma iyiphi i-Google Analytics hit. Lokhu kusho ukuthi abagaxekile bangathumela ithrafikhi eqondile, i-traffic organic fake, i-traffic organic fake, kanye nedatha ekhohlisayo evela ku-media media. Abahlaseli bangabheka ukubuka kwekhasi elibonakalayo, imicimbi, igama lokusingatha, isicelo se-URL, into yokuthengiselana, namagama angukhiye. Ngaphezu kwalokho, abaduni badinga i-ID ye-Google Analytics ukwenza imilingo yabo engcolile. Ngokuvamile, bangabhala kabusha ulwazi lwe-analytics kusuka kunoma iyiphi indawo emhlabeni jikelele nangaphandle kokufinyelela kwe-akhawunti ye-Google Analytics.
Ukulahla Ugaxekile kolimi ku-Google Analytics ngokusetha Isihlungi segama le-Hostname
Lesi sihloko siwusizo ikakhulu kubasebenzisi abakwa-Google Analytics abathola isipiliyoni somoya kanye nokudluliselwa. Ngakho-ke, lesi sigaba sizoxoxa ngendlela yokunciphisa noma yokuqeda imiphumela emibi yezimoto ezikhohlisayo kumbiko we-Google Analytics.
Iningi labasebenzisi be-intanethi bathole lolu hlobo logaxekile ku-Google Analytics yabo. Ngakho-ke, abasebenzisi be-intanethi bangaqeda kanjani logaxekile? Kulo xhumano, lesi sigaba sichaza ukuthi isihlungi segama lomsingeli singasetshenziswa kanjani ukuhlunga iningi logaxekile. Landela izinyathelo ezingezansi:
1. Vakashela ikhasi le-Admin le-Google Analytics
ekhasini le-Google Analytics, chofoza inkinobho ngakwesokudla bese ukhetha "Izihlungi".
2. Chofoza ku-Blue inkinobho ethi "Engeza ukuhlunga"
Isihlungi esisha kufanele sisethelwe kulo mbono njengemikhuba emihle ye-Google Analytics. It kugcina eyodwa single unfiltered traffic website.
3. Dala isihlungi segama lokusingatha
Ekhasini le-Google Analytics, khetha "Dala isihlungi esisha" ngakwesokunxele ngakwesobunxele bese ufaka igama le-Filter endaweni enikeziwe. Ngaphansi kokuthi "Uhlu Lokuhlunga" khetha "Okuchazwe ngaphambilini," bese ukhetha amamenyu amane ahlaselwa ukhethe 'faka kuphela'> 'ithrafikhi igama lomphathi' elinganayo, 'bese ufaka i-URL yewebhu. Okokugcina, hamba emuva futhi uhlole ama-hostnames abikwe nge-traffic legit website. Qinisekisa ukufaka wonke ama-hostname ahlotshaniswa nomgwaqo wangempela kwisayithi.
4. Londoloza isihlungi seSayithi
Isihlungi esilula kumele sinakekele ugaxekile wokuthungwa okwenziwe ngobuningi obungozi esizeni.